कसरी गुणस्तर हानि बिना भिडियो संकुचन गर्न?
सबैभन्दा कठिन र दुष्कर एक छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, र कहिले काँही यो डिजिटल भिडियो फाइलहरू प्रविधिहरू को दुनिया मा तिनीहरूलाई संकुचन गर्न आवश्यक छ। तथापि, साधारण, आकार मा कमी उत्पादन उत्पादन को गुणवत्ता मा एक हानि गर्न जान्छ। तर यो न्यून पारिएको वा पूर्ण जोगिन प्रयास गर्न सकिन्छ। अक्सर, प्रयोगकर्ताहरूले बस एक ठहराव आउन गर्दा भिडियोको स्याचुरेसन संग पहिलो भेट। यो एक सामान्य भिडियो स्थायी बस आधा एक घण्टा लगभग दस गिगाबाइट लाग्न सक्छ कि अनौठो देखिन्छ। र यी क्लिप केही, यो पर्याप्त छैन भने कुनै पनि डिस्क तिनीहरूलाई भण्डारण गर्न। त्यहाँ, कुनै पनि तरिका हो कसरी भिडियो संकुचन गर्न गुणस्तर हानि बिना?
हो, यो कार्यक्रम Virtualdub प्रयोग गर्न सकिन्छ। निर्मित कोडेकहरू को मद्दतले यो भिडियो क्लिप को आकार पूर्ण स्वीकार्य समायोजित गर्न सकिन्छ, र यो छवि गुणस्तर गुमाउनु छैन। यो कार्यक्रम निःशुल्क छ, र यो सजिलै विकासकर्ता वा साइटबाट डाउनलोड, वा निर्देशिका निःशुल्क सफ्टवेयर को कुनै पनि साथ हुन सक्छ। साथै, Virtualdub लामो रूसी इन्टरफेस त्यसैले बुझ्न भएको छ, यो कार्यक्रम मा गाह्रो छ।
तपाईं गुणवत्ता को हानि बिना चलचित्र संकुचन अघि, तपाईं स्थापित कार्यक्रम, जो को माथि प्रश्न मा खोल्न आवश्यक छ। यसको विन्डो आफ्नो अपलोड भिडियो पहिलो फ्रेम खुल्छ। ध्वनि, कुनै पनि परिवर्तन बिना रूपमा छ छोड्नुहोस्। यो गर्न, अडियो मेनुमा क्लिक गर्नुहोस् र प्रत्यक्ष स्ट्रिम प्रतिलिपि क्लिक गर्नुहोस्। भिडियो प्रवाह प्रक्रिया बनाउनको लागि, तपाईं बटन थिच्नुहोस् भिडियो र पूर्ण प्रशोधन मोड आवश्यक छ।
अर्को चरण गुणस्तर को हानि बिना भिडियो संकुचन छ - लागि सङ्कुचन कोडेक को प्रकार को विकल्प हो। सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प डिवएक्स गर्न हुनेछ। यो आफ्नो गुणस्तर को हानि गर्न, चलचित्र संकुचन गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, यसरी प्राप्त भिडियो प्ले गर्न सकिँदैन पीसी मा, तर पनि एउटा साधारण घर डीभिडी खेलाडी मात्र छैन। त्यसैले, फेरि, बटन र भिडियो सङ्कुचन क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि कोडेकहरू को सूचीमा डिवएक्स प्रो 5.0.3 कोडेक मा आफ्नो रुचि रोक्न। को छनोट कन्फिगर बटन क्लिक गरेर पुष्टि हुन अनिवार्य छ।
प्रक्रिया को लडी कसरी गुणस्तर कुनै पनि हानि बिना भिडियो संकुचन, तपाईं एक अतिरिक्त विन्डो चयन कोडेक सेट लागि खोल्न गर्नुपर्छ। ठाँउ ट्याब प्रोफाइल निशान, यो विकल्प प्रयोग गर्नुहोस् दोहोरोदिशानिर्देशनात्मक Encode विपरीत हुनुपर्छ। अब तपाईं सामान्य परिमिति ट्याबमा जानुहोस् र सामान्य सबै उपलब्ध त्यहाँ Sliders को सेटिङ मान बनाउन आवश्यक छ।
अर्को, ट्याब बिटरेट परिमिति जसको अर्थ पहिलो Multipass, 1st पास, चयन "बहु-नमूना सङ्कुचन, 1st पास।" त्यसपछि तपाईं बिट-दर को मापदण्डहरु सेट गर्न आवश्यक: उच्च यसलाई छ, राम्रो हुनेछ संकुचित भिडियो गुणस्तर। अन्य सबै मापदण्डहरु अपरिवर्तित बाँकी हुनुपर्छ। एक पटक र त्यसपछि फेरि ठीक क्लिक गर्नुहोस्।
लामो प्रतीक्षा क्षण: अर्को चरण कसरी गुणस्तर कुनै पनि हानि बिना भिडियो संकुचन मा हुन्छन्। मेनु मा, फाइल चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि AVI रूपमा सुरक्षित पालना गर्नुहोस्। सञ्चालन गरेपछि, तपाईँले उत्पादन फाइल सानो छ प्राप्त, तर यो मात्र जानकारी कुनै भिडियो स्ट्रिम छ, तर अझै पनि। अब हामी बिन्दु Multipass, nth पास, एक रूपमा बुझे हुनुपर्छ जसमा रोक्न भनेर शीर्षक बिटरेटहरू परिमिति ट्याबमा रहेका कोडेक सेटिङहरू पुन: प्रवेश गर्न विकल्प आवश्यकता हो, र यो समय "बहु-नमूना सङ्कुचन, N-NY पास।" फेरि, ठीक मा डबल क्लिक गर्नुहोस् र फेरि AVI ढाँचामा फिल्म बचत गर्नुहोस्। सामान्य भिडियो को डबल प्रक्रिया एक प्रकारको, अलिकति बढी समय आवश्यक, तर एकै समयमा क्लिप गुणस्तरमा गुमाउनु भएन, तर यसको मात्रा परिमाण धेरै आदेश कम छ।
तपाईं कसरी गुणस्तर कुनै पनि हानि बिना AVI संकुचन थाहा छैन भने, त्यसपछि निम्न गर्न नै कार्यक्रम प्रयास: रहने4Xvid एमपीईजी-कोडेक पहिलो, कोडेकहरू सूचीबाट, र त्यसपछि कन्फिगर क्लिक गर्नुहोस्। Targetquantizer लागि नयाँ विन्डोमा क्लिक, बिटरेट मोड लक्षित गर्न, र सही गर्न स्लाइडर सार्न स्विच गर्नुहोस्। अल्ट्रा उच्च, र WHQ मोड4बनाउन स्थापना WideSearch - मा गति खोज सटीक मेनु6स्थापना गर्न कहाँ भनेर पछि, थप क्षेत्र अनुरूप बटन मा एउटा नयाँ विन्डो प्रदर्शन गर्न क्लिक गर्नुहोस्। यसबाहेक, यस र निम्न2Windows मा ठीक प्रेस छ। अर्को, भिडियो फाइल खोल्न र फाइल मेनु रूपमा सुरक्षित क्लिक गरेर यसलाई रूपान्तरण।
1 C को सदस्य सेवा
DjVu पढेर लागि कार्यक्रम - एक लोकप्रिय नयाँ ढाँचामा
Cardiomyopathy - यो ... dishormonal र dysmetabolic cardiomyopathy
"Laktazar" बेबी: समीक्षा, मूल्यहरू
चामल संग करी नुस्खा: को श्रीलङ्काली, जापानी मा
BIM प्रविधि के हो? निर्माण यसको प्रयोग
सस्ती उपभोग्य संग रंग लेजर प्रिन्टर
घर मा चकलेट व्यञ्जनहरु को एक किसिम
समारा मा Zhiguli भठ्ठी
रेस्टुरेन्ट मास्को मा "Odzhahuri": एक सिंहावलोकन, वर्णन, मेनु र समीक्षा
बच्चा कहिले रातभरि सुत्न सक्छ? सुझावहरू र ट्रिक्सहरू